11 qaab oo lagu yareeyo laalaabka maqaarka indhaha ee muujiya da’da | Wardeeq 24 TV
Home Barnaamij-yada 11 qaab oo lagu yareeyo laalaabka maqaarka indhaha ee muujiya da’da
11 qaab oo lagu yareeyo laalaabka maqaarka indhaha ee muujiya da’da
Dhammaanteen waan jeclaan lahayn inaan waqtiga dib u celinno si aysan da; nooga muuqanin.
Maqaarka ayaa kaalin weyn ka qaata in qofka ay ka muuqato da’da, marba marka ka dambeysana wuu sii laalaabmaa. Meela ugu horreeya ee laga gartana waxaa ka mid ah indhaha agagaarkooda.
Dadka qaar waxay awoodaan inay labiska isaga dhigaan dhallinyaro ama ay ku socdaan gawaari nooca da’ yarta u badan yihiin ah, laakiin wali maqaarkooda ayaa fashilaya.
Sannado badan badan kaddib habka wajigaaga iyo isbadbaddalka miisaankaaaga ee aan xasilooneyn ayaa horseeda in uu laalaab soo galo agagaarka indhaha.
Hase ahaatee, nasiib wanaag waxaa jira qaabab lagu yareyn karo in maqaarka ay durba kasoo muuqato da’da.
Baddal Cuntadaada: Waxaa la ogaaday in cuntooyinka u badan khudaarta ay yihiin kuwo lagama maarmaan u ah wax kasta oo ku saabsan nolosha qofka. Waxyaabaha ay u wanaagsan yihiinna waxaa ka mid ah maqaarkaaga.
Biyo badan Cab: Maqaarkaaga waa qeybta ugu weyn ee jirkaaga sida ay sheegeen khubarada caafimaadka. Biyaha ayuu u baahan yahay si la mid ah sida ay geedaha ugu baahan yihiin.
Xiro Okiyaalaha qorraxda celiya: Marka ugu horreysa, indhahaaga waxay u baahan yihiin inaad ka difaacdo fallaaraha tooska ah ee qorraxda, si aysan iskood uga gabanin. Marla ay ka gabanayaan waad soo aruurineysaa maqaarka sidaas ayuuna astaamo ku sameysanayaa.
Isticmaal kareemada maqaarka: Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah kareemada lagu nafaqeeyo maqaarka, kuwaasoo kaa caawinaya inaad hesho Vitamin-nada iyo daweynta uu maqaarkaaga tabayo. Kareemadan waxaa ka mid ah kuwa qorraxda loo marsado iyo kuwa maqaarka qooya.
Dhaqdhaqaaq samee: Jimicsiga ayaa ah tallaabada koowaad ee lagu hormariyo caafimaadka maqaarka, sidoo kalena wuxuu qariyaa da’da.
Jooji sigaar cabista: Xabad walba oo sigaar ah oo aad cabto waxay dhaawac u geysaneysaa maqaarkaaga. Sidaas darteed, marka aad joojiso uun ayaad ka hadli kartaa sida uu jirkaaga ku toosi lahaa.
Yaree socodka waqtiga ay qorraxda kulushahay: Caafimaadka maskaxdaada iyo kan jirkaaguba wuxuu ku jiraa inaad hawo bannaanka u baxdo si aad hawo nadiif ah u hesho, laakiin iska ilaali inaad soo baxdo waqtiga ay qorraxdu aad u kulushahay.
Miisaankaaga ilaali: Mar walba culeyska jirkaaga ama miisaankaaga ha joogo meel caafimaad leh. Yuusan u badanin dhanka caatada iyo dhanka cayilka toona. Taas waxaa kaa caawin kara qaar ka mid ah qodobbada kor ku xusan, sida hagaajinta cuntooyinka iyo jimicsiga.
Hurdo fiican hel: Waqtiga aad hurdeyso waa marka uu maqaarkaaga soo kabanayo. Inta uu qofka soo jeedo wuxuu jirka sameeyaa unugyo ka caawinaya qofka inuu howlahiisa fuliyo laakiin marka ay taas waqtigeeda dheeraato oo hurdo fiican ay soo dhex gali weyso waxaa dhaawacmaya maqaarka.
Yaree qabeyska tuubada: Biyaha ka socda tuubada waxay leeyihiin kiimikooyin lagu nadiifiyo, dhammaantoodna waxay u daran yihiin caafimaadka maqaarkaaga. Sidaas awgeed intii karaankaaga ah yaree inaad ku qabeysato biyaha tuubada toos uga imaada.
Kalluun badan cun: Sababta ay u fiican tahay in kalluunka la badsado waa in hilibka kalluunka uu leeyahay maaddada Omega3 oo maqaarka ka caawisa inuu iftiimo, da;dana aysan ka muuqanin.
Previous articleMadaxweynihii Hore Ee Dalka Ivory Coast Oo Dembiyo Dagaal Loo Haysto Oo Dib Ugu Laaban Doona Dalkiisa
Next article7 cunto oo sabab u noqda laab jeexa (iska ilaali)